Raw Estradiol ntụ ntụ (50-28-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol ntụ ntụ Usoro / Estradiol ntụ ntụ
SKU: 50-28-2. Categories: Estradiol ntụ ntụ Usoro, Hormones
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram na usoro nhazi nke Estradiol ntụ ntụ (50-28-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Estradiol bụ ụdị estrogen, hormone nke nwanyi nke ụmụ ovaries mepụtara. Estrogen dị mkpa maka ọtụtụ usoro n'ime ahụ. Nri a bụ hormone nwanyi. Ndị nwanyi na eji ya iji nyere aka belata ihe mgbaàmà nke ndị na-eme mpụ (dị ka ọkụ ọkụ, ikpo ọkụ). Mgbaàmà ndị a na-akpata site na ahụ nke na-eme ka estrogen dị ala karịa.
Raw Estradiol ntụ ntụ bụ isi ihe
Ọbara arọ: 272.38
Melt Point: 173 ka 179 Celsius C
Raw Estradiol ntụ ntụ na-eji usoro steroid
Estradiol (CAS 50-28-2) (E2), sụgharịrị oestradiol, bụ steroid, estrogen, na hormone ahụ bụ isi nwanyị.
Raw Estradiol ntụ ntụ Njikere
Were estradiol kpọmkwem dị ka e kenyere gị. Soro ntuziaka niile na akara aha gị. Ejila ọgwụ a buru ibu ma ọ bụ obere ma ọ bụ karịa ogologo oge.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ọka Raw Estradiol
Ekwesighi iwere estradiol ma oburu na i nwere: oria imeju, oria mmuputa, oria mmikpo di iche iche, akuko banyere oria a na-egbu egbu (dika ara, uterine, nwa ohia, ma obu oria cancer), ma oburu na i nwere obi obi , ọrịa strok, ma ọ bụ eriri ọbara.
Raw Estradiol ntụ ntụ ntụziaka
Ndị ọgwụ ndị ọzọ nwere ike iso etradiol na-emekọrịta ihe, gụnyere ọgwụ ndị ọgwụ na ọgwụ ndị na-ere, na vitamin, na ọgwụ ndị na-esi na ya. Gwa onye ọ bụla n'ime ndị na-elekọta gị ahụike gbasara ọgwụ niile ị na-eji ugbu a na ọgwụ ọ bụla ị malitere ma ọ bụ kwụsị iji.
Ndepụta a ezughi oke ma ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ nwere ike imekọrịta na estradiol. Gwa dọkịta gị banyere ọgwụ niile ị na-eji. Nke a na-agụnye ndenye ọgwụ, n'elu-na-counter, vitamin, na ọgwụ osisi. Adịla ịmalite ọgwụ ọhụrụ n'ekwughị dọkịta gị.
Powell Estradiol (CAS 50-28-2)
Raw Estradiol ntụ ọka Marketing
Esi zụta Estradiol ntụ ntụ (CAS 50-28-2) site na AASraw
AAS raw na-enye 99% Estradiol ọcha ntụ ntụ maka mmepe na nzizi nke ụmụ nwanyị ịmụ nwa.
Estradiol Ntụziaka ntụpọ ntụ ntụ
1 nyochaa maka Estradiol ntụ ntụ
Estradiol ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi